Fatana mora, iza no vidiana amin'ny 2022? Hafanaina amin'ny vola kely
Radiators fanjifana ambany
Conditioner portable misy paompy hafanana
Ny fatana dia fitaovana ampiasaina hampitombo ny mari-pana ao amin'ny efitrano izay ametrahantsika azy. Manampy antsika ho mafana amin’ny fotoana mangatsiaka indrindra izany. Misy karazany maro ny fatana arakaraka ny karazana solika izay ampiasainay hampitombo ny mari-pana.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hamakafaka ny karazana fatana rehetra misy sy ny tombony sy ny tsy fahampian'ny tsirairay. Ho fanampin'izay, ho afaka hahafantatra ny vidiny ianao ary miditra amin'ireo izay manana kalitao bebe kokoa sy vidiny tsara.
Ny fatana mora indrindra hanafana ny tranonao amin'ny ririnina
Ireto misy fatana fatana tsara indrindra hisorohana ny hatsiaka amin'ny ririnina. Amin'ny iray amin'ireto modely ireto dia hahomby ianao satria tian'ny mpampiasa izy ireo ary manana sanda tsara indrindra amin'ny vola:
Orbegozo BP 5007 –... Jereo ny fiasa 962 hevitra Jereo ny fifanarahana
Orbegozo BP 0102 - Ove ... Jereo ny fiasa 253 hevitra Jereo ny fifanarahana
Orbegozo BB 5000 - Fatana ... Jereo ny fiasa 432 hevitra Jereo ny fifanarahana
FAtana hazo mainty... Jereo ny fiasa 5 hevitra Jereo ny fifanarahana
Fatana fatana 14 kW... Jereo ny fiasa 3 hevitra Jereo ny fifanarahana
AVANT AV7554 - Fatana ... Jereo ny fiasa 145 hevitra Jereo ny fifanarahana
Ny tsara indrindra	Orbegozo BP 5007 –...
Kalitaon'ny vidiny	Orbegozo BP 0102 - Ove ...
Ny ankafizinay	Orbegozo BB 5000 - Fatana ...
FAtana hazo mainty...
Fatana fatana 14 kW...
AVANT AV7554 - Fatana ...
ny fatana pellet Niparitaka nandritra ny taona maro izy ireo noho ny fahombiazany sy ny fahombiazany. Tsotra sy tsy lafo ny fampandehanana azy. Ny fatana dia manana tanky hitehirizana ny solika, amin'ity tranga ity, ny pellet. Rehefa miasa ny fitaovana izahay, sikina mamindra ny pellet ao amin'ny efitrano fandoroana mba handrehitra afo amin'ny hafainganam-pandeha asehon'ny rafitra fanaraha-maso elektronika.
Mirehitra ny pellets, mamoaka hafanana sy setroka izay alefa amin'ny fivoahana aoriana izay mampifandray ny setroka ivelany.
Raha te hanana fatana pellet ianao dia araraoty ny tolotray.
Jereo fatana pellet
Ny iray amin'ireo tombony atolony dia ny fahafahana manao fandaharana ny fotoana izay arehitra ny fatana mba hanomezana hafanana ny efitrano ary vonoina indray. Ireo fatana ireo dia tena afangaro amin'ny fatana biomass, satria ny pellet dia karazana solika biomass. Izy io dia voaforon'ny sawdust compacted amin'ny endrika cylinders kely. Amin'ny ankapobeny, ny pellets roa kilao dia manome hafanana mitovy amin'ny ateraky ny gazoala iray litatra.
Izy ireo no fatana mora indrindra misy ankehitriny. Ny lasantsy dia ny biomass hita any anaty ala. Izy ireo dia mifototra amin`ny fatana hazo nentim-paharazana ny androm-piainany, fa ampiharina ny teknolojia avo indrindra. Mampahazo aina kokoa ny fampiasana azy izany ary manatsara ny fandoroana.
Satria ara-tontolo iainana sy voajanahary tanteraka ny solikany, dia tsy dia manimba ny tontolo iainana izy ireo. Izy ireo dia tonga lafatra amin'ny fanararaotana ny hafanana voajanahary sy madio indrindra.
ny fatana hazo izy ireo no mahazatra indrindra. Ireo dia fitaovana mampiasa kitay ho solika. Ny hazo no ahazoana kitay. Ny fampiasana azy isan'andro dia ao an-dakozia any ambanivohitra, na dia manome hafanana sy mampitombo ny mari-pana ao amin'ny efitrano iray ihany koa aza.
Amin'ny ankapobeny, ny fatana hazo rehetra dia manana sodina izay mifarana amin'ny setroka mandroaka ny entona ateraky ny fandoroana ary manampy amin'ny fampihenana ny mety hisian'ny rivotra maloto.
Izy ireo no fatana tsotra indrindra ampiasaina ary manome fialan-tsasatra bebe kokoa noho ny tontolo iainana fanampiny izay atolotry ny lelafo. Mety haharitra adiny efatra vao hirehitra ny lelafo, saingy afaka mitazona ny hafanana tsara hatramin'ny 20 ora eo ho eo. Ny fatana kitay mirehitra mandritra ny adiny 9 eo ho eo dia manome hafanana ampy mandritra ny alina iray manontolo.
Liana hividy fatana hazo? Eto ianao dia hahazo azy ireo mora kokoa.
Jereo ny fatana fandoroana kitay
Ny kitay ampiasaina dia tsy maintsy manana hamandoana kely raha tianao hirehitra ela kokoa. Arakaraka ny maina ny kitay no mahamay kokoa azy.
Eo koa ny fatana hazo misy lafaoro mba hanararaotra ny hafanana aterak'izany ary mahandro sakafo sasany toy ny mofo, ny pizza, ny skewer ary ny roa.
Ny volavolan'ny fatana fatana mamela azy ireo fahombiazana bebe kokoa. Ny solika ampiasaina amin'io fotoana io entona butane izany. Matetika izy ireo no manana fampisehoana tsara. Taloha dia natahotra ny hividy sy hampiasa entona voajanahary na botana entona butana ny olona.
Na izany aza, amin'izao fotoana izao, ireo karazana fatana ireo dia tena azo antoka. Fanampin'izany, afaka mamokatra tahiry fanampiny isam-bolana izy ireo ary azontsika ampiasaina amin'ny fotoanan'ny hamehana.
Ny fatana entona dia miavaka amin'ny vidiny mora. Raha te hanararaotra ny vidiny tsara indrindra ianao dia aza adino ny tolotray.
Jereo fatana entona
Tena tsotra ny fiasan'izy io. Izy io dia manana rafitra izay ametrahana ny cylinder entona butane ary ny fandoroana dia miandraikitra ny fitazonana ny fandoroana mavitrika. Mandritra ny dingana, ny entona butane dia dorana miaraka amin'ny oksizenina eny amin'ny rivotra ary manome hafanana ao amin'ny efitrano.
Ireo fatana ireo dia azo afindra mora foana avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny iray hafa raha tiana (raha mbola maty izy ireo). Izy ireo dia mety tsara amin'ny fanafanana efitrano kely kokoa, satria haingana izany.
Tsy dia fantatra loatra ireo karazana fatana ireo, saingy tena mahomby. Izy io dia rafitra portable izay tsy mitaky karazana fametrahana sy/na fikojakojana. Rano (paraffin) ny solikany ary mangina be ny fandoroana azy.
Anisan'ny tombony azony ny fanamorana ny fitaterana azy ireo avy amin'ny efitrano iray mankany amin'ny iray hafa sy ny hafainganan'ny hafanana. Ankoatra izany, ny hafanana vokarin'ny fatana paraffin tsy mivondrona toy ny heater elektrika izy io, fa miparitaka tsara kokoa manerana ny efitrano. Izany dia mahatonga ny fahatsapana fampiononana atolony ho lehibe kokoa.
Mpampiasa maro no misafidy ny fatana paraffine na kerosene noho ny sandany avo lenta sy ny fiarovana azy. Raha te hividy fatana paraffin ianao dia araraoty ny tolotray.
Jereo fatana paraffine
Raha ampitahaina amin'ny fanjifana fatana hafa, ny fatana paraffine dia ambany dia ambany.
ny Fatana elektrika Izy ireo dia fitaovana mampiasa herinaratra mba hanafanana ny fanoherana sy hampitombo ny mari-pana manodidina. Izy ireo dia manome ny hafanana madio sy madio indrindra, satria tsy miteraka karazana entona. Ny iray amin'ireo lesoka dia ny fisondrotry ny faktioran-jiro.
Saika miely patrana ny fampiasana fatana elektrika ary tena mahazo aina izy ireo ny fitaterana avy amin'ny efitrano iray mankany amin'ny iray hafa ary na dia mandehandeha aza ianao. Tsy dia tsara loatra amin’ny fitsitsiana anefa izy ireny, satria mampiakatra be ny saran-jiro raha ampiasaina matetika.
Ny fatana elektrika dia fividianana tsara foana mba hanafanana efitrano ara-potoana. Mora sy ambany izy ireo, noho izany dia mety tsara amin'ny fampiasana tsindraindray.
Jereo fatana elektrika
Tena tsara izy ireo raha te hampifantoka ny hafanana amin'ny efitrano iray na roa ianao ary tsy mila ny hafanana hiparitaka amin'ny efitrano rehetra ao an-trano.
Variables tokony hodinihina rehefa mifidy fatana
Mba hisafidianana karazana fatana iray na hafa, dia zava-dehibe ny mandinika lafin-javatra maromaro:
Ny voalohany dia ny fahafahan'ny fatana hamokatra hafanana amin'ny vidiny ambany indrindra. Amin'ny ankapobeny, arakaraky ny herin'ny fatana no betsaka kokoa ny solika ilainy na ny fanjifana herinaratra bebe kokoa (raha ny fatana elektrika).
Mba hahafantarana ny tanjaky ny kaloria ampy amin'ny fatana, dia mila mahafantatra ny fitambaran'ny trano. Ny hery dia refesina amin'ny kW. Ny herin'ny kW tsirairay dia mahavita manafana 8 metatra toradroa Ny surface. Noho izany, raha 80 metatra toradroa ny tranonao, dia ampy ny herin'ny 10 kW.
Mba hahafantarana hoe inona ny fatana no tsara indrindra amin'ny toe-javatra misy anao, dia zava-dehibe tokoa ny mahafantatra ny efitrano izay hampiasana azy be indrindra na ny toerana hametrahana azy. Raha 30 metatra toradroa ny efitrano lehibe, dia tsy maintsy mampiasa hery somary ambony kokoa noho ny 20 metatra toradroa isika. Mba hanamafisana ny fampiasana ny fatana, dia tsara ny mampiasa ny angon-drakitra momba ny kW voalaza etsy ambony.
Ny toerana misy ny fatana dia antony iray hamaritana ny fahombiazany. Raha ny efitrano izay hametrahantsika na hapetratsika no mafana indrindra, tsy maintsy hampiasa izany fotoana kely kokoa isika. Mifanohitra amin'izany, raha mangatsiaka indrindra, dia tsy maintsy mametraka ny efitrano isika mba hampihenana ny fandaniana ny fatana.
Mba hampitomboana bebe kokoa ny fahombiazan'ny fatana, andramo ny mifidy toerana ao amin'ny ampahany amin'ny efitrano izay misy insulation tsara indrindra, mba tsy ho very ny hafanana avy amin'ny fatana amin'ny rindrina na varavarankely. Zava-dehibe ny mamela toerana eo amin'ny 40 sm eo anelanelan'ny rindrina sy ny fatana na zavatra mora mirehitra mba hisorohana ny afo.
Tena ilaina tokoa ny fisian'ny rafitra fandoroana rivotra sy fandroahana setroka ny efitrano ametrahanay fatana mba hialana amin'ny hafanana be loatra na ny loza mety hitranga amin'ny afo.
Windows sy insulation
Raha manana insulation tsara ny trano sy ny varavarankely misy glazed roa, dia hanao tsara kokoa ny fatana. Aza adino ny miala elanelana tokony ho 30-40 sm eo anelanelan'ny fatana sy izay zavatra mety may.
Ahoana ny fisafidianana ny fatana
Rehefa fantatra ny fari-piadidiana rehetra tokony hodinihina, dia afaka misafidy izay fatana mety ho antsika isika.
Ny fatana vita amin'ny hazo dia ireo izay manome hafanana avo indrindra sy fandoroana madio. Afaka mandeha amin'ny solika azo havaozina izy ireo toy ny fanetezana kitay. Ankoatr'izay, manana ny haingon-trano izy ireo izay atolotry ny lelafo ho antsika. Izy io dia afaka manome antsika ny atmosfera ao an-trano izay tadiavintsika. Misy modely maro azo ampifanarahana amin'ny haingon-trano izay tiantsika indrindra. Anisan'ny tombony azony izany zara raha mila asa. Mila fifandraisana amin'ny ivelany fotsiny izy ireo ho an'ny fivoahan'ny setroka.
Amin'ny lafiny iray, ny fatana izay namboarina tamin'ny akora vy sy ny fitaovana refractory dia voaomana hanafana toerana lehibe kokoa noho ny kitay.
Raha mila hafanana haingana kokoa nefa tsy maharitra ianao, dia mifidiana fatana vita amin'ny vy. Raha mila hafanana mahery kokoa sy maharitra ianao, saingy miadana kokoa amin'ny voalohany, Misafidiana fatana hazo, biomass na pellet.
Marika fatana tsara indrindra
Ho an'ny karazana kitay tsirairay dia misy marika manolotra fatana tsara kokoa sy mahomby kokoa.
Ho an'ny fatana hazo dia mahita marika malaza isika toa an'i Rocal, Carbel, Hergom ary Bronpi.
Ny fatana pellet dia manana marika fanta-daza toy ny Lacunza, Ecoforest, Bronpi ary Edilkamin.
Raha ny momba ny fatana entona dia mahita marika matanjaka toy ny DeLonghi sy Orbegozo.
Ho an'ny fatana paraffin dia manana marika tsara kalitao / vidiny toy ny Qlima, Webber ary Kayami.
Ny fatana elektrika dia manana marika maromaro kokoa, satria azo amidy kokoa. Hitantsika ny marika tsara indrindra toy ny Orbegozo, Clatronic, Rowenta, Klarstein, Thermic Dinamics, DeLonghi ary Taurus.
Amin'ity fampahalalana ity dia azonao atao ny misafidy izay fatana tsara indrindra amin'ny toe-javatra misy anao ary mitahiry betsaka araka izay azo atao amin'ny fanafanana rehefa mankafy ny tombontsoa rehetra.
1 Ny fatana mora indrindra hanafana ny tranonao amin'ny ririnina
2 Karazana fatana
2.1 Conditioner portable misy paompy hafanana
2.2 Heater seramika
2.3 Radiators fanjifana ambany
2.4 Radiator menaka
2.5 Fatana hazo
2.6 Fatana bioethanol
2.7 Fatana Pellet
2.8 Fatana hazo
2.9 Fatana gazy
2.10 Fatana paraffin
2.11 Fatana elektrika
3 Variables tokony hodinihina rehefa mifidy fatana
3.1 Hery fanafanana
3.2 Haben'ny efitrano
3.5 Windows sy insulation
4 Ahoana ny fisafidianana ny fatana
5 Marika fatana tsara indrindra
Ho an'ny ririnina
Fatana paraffine sy kerosene
Fatana pellet sy biomass